ဝဋ်ကြွေးတုန်တင် Tin Hlaing Oo(Thayet) — Steemkr
ဝဋ်ကြွေးတုန်တင် Tin Hlaing Oo(Thayet)
tinhlaingoo61 in mynamar
ကျုပ် သပြေတန်းရွာကိုရောက်လာတာ ကိုဖိုးချစ်ကျေးဇူးပေါ့ဗျာ…..
ကျုပ်ကလည်း ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်၊ အားကောင်းမောင်းသန်ဆိုတော့ ကိုဖိုးချစ်က ကျုပ်ကို လွှတ်ဂရုစိုက်တာပေါ့ဗျာ… ဒီလိုနဲ့ ကျုပ်ရယ်၊ ကိုဖိုးချစ်ရယ်ဟာ စီးပွားဖက်တွေ ဖြစ်လာ တယ်ဆိုပါတော့…
ကျုပ်လိုအပ်တာ မှန်သမျှ ကိုဖိုးချစ်က အကုန်ဖြည့်ဆည်းပေးတာဗျ၊ ကျုပ် မျက်နှာတစ်ချက်မညှိုးစေရပါဘူးဗျာ။ ကျုပ် နေဖို့ထိုင်ဖို့ကစ လစ်ဟာမှုမရှိစေရပါဘူး ဗျာ၊ ကျုပ်ဖက်ကလည်းတာဝန်ကျေ ခဲ့တာကိုး ၊ ကျုပ်နဲ့ပတ်သက်လို့ ကိုဖိုးချစ်မှာလည်း ပျဉ်ထောင်၊ သက်ငယ်မိုး အိမ်ကလေးကနေ အုတ်ခံ တစ်ထပ်တိုက်ကလေးဖြစ်လာ တယ်ဗျာ၊ မကြာပါဘူးဗျာ တရုပ်ဆိုင်ကယ်လေးတစ်စီး ပိုင်လာပြန်တာပဲ။
ကျုပ်ကလည်းသူ့အတွက်ဆိုရင် သောင်းဂဏန်းကနေ၊ သိန်းကြီးပိုင်းအထိ တက်ပြီးရှာပေးနိုင်ခဲ့တာကလား။ ကိုဖိုးချစ် အခြေမြင့်လာသလို ကျုပ်နာမည်ကလည်း ဒီနယ်တကြောမှာသာမက နယ်ကျော်လို့ နာမည်ကြီးလာခဲ့တယ်လေ…..
ကျုပ်နာမည် အရင်းကတော့ ရွှေတုပ် ဗျာ၊ ဒါပေမယ့် ပထမဆုံးအကြိမ် ကျုပ်ကိုဖိုးချစ်အတွက် ငွေရှာပေးတဲ့နေ့ကပဲ ရွာထဲကလူတွေက ကျုပ်ကို ဝမ်ချိုင်း လို့ ခေါ်လိုက်တော့ ကျုပ်မိတ်ဆွေကိုဖိုးချစ်ကလည်း သဘောကျပြီး လိုက်ခေါ်တာနဲ့ ကျုပ် နာမည်ရွှေတုပ် ကို ဘယ်သူမှမသိကြတော့ဘဲ ဝမ်ချိုင်းလို့ပဲသိကြတော့တာပေါ့။
ခင်ဗျားတို့လည်း ကျုပ်ကို ဝမ်ချိုင်းလို့ပဲခေါ်နိုင်ပါတယ်ဗျာ။ ဒီနယ်မှာတော့ ကျုပ်နဲ့တွေ့ရင် ကျိုးရင်ကျိုး၊ မကျိုးရင် ကန်းပေါ့ဗျာ၊ ကျုပ်ကလည်းအဲလောက် လက်စွမ်းလက်စကောင်းတာဗျ။ တော်ရုံကျုပ်နဲ့ မယှဉ်ရဲကြတော့ အဝေးက ပြိုင်ဖက် တွေကိုပဲ ကျုပ်ကမျှော်နေရတော့တယ်။ ကျုပ်လည်းပွဲ ကျဲတော့အနားရတာပေါ့ဗျာ။
အဲကိုဖိုးချစ်အတွက်လည်း အဆင်ပြေတယ်ဗျ၊ ပွဲကျဲပေမယ့် ပွဲဖြစ်ရင် အချီကြီးတော့ တွက်သားကိုက်တာပေါ့ဗျာ။ ဒီနေရာမှာလောဘသားဆိုတော့ ကိုဖိုးချစ် ကျုပ်မသိတဲ့ စီးပွားရေးတွေကိုတွဲဖက်လုပ်လာတယ်ဗျာ။ ကျုပ်က ဆိုင်ကယ်လောက် ရှာပေးနိုင်တာ၊ အခုကျုပ်ဆရာကိုဖိုးချစ်က ကားတွေဘာတွေ စီးလို့ဆိုတော့ အဆင်ပြေ ပုံပါပဲ။
တစ်နေ့ ကိုဖိုးချစ် ပွဲကြီးတစ်ပွဲစပ်လာတယ်ဗျာ၊ ပွဲမဝင်ခင် ကျုပ်ကိုလည်း ပြုစုလိုက်တာ၊ ပြီးတော့ပြောသေးတယ် …
“မိတ်ဆွေကြီးရေ… ဒါ အကြိုပွဲ၊ ဒီပွဲနိုင်လို့ နောက်တစ်ပွဲနွဲပြီးရင် မင်းကို ကျုပ် အနားပေးတော့မယ်”
ကျုပ်မနားချင်သေးပါဘူးဗျာ၊ ကျုပ်အားကောင်းမောင်းသန်၊ သက်လုံကောင်း ပါသေးတယ်ဗျာ၊ ပြိုင်ပွဲနေ့မှာတော့ အပြာရောင်ဖျော်ရည်တွေတိုက်တာပဲဗျာ၊ အားဆေး လို့ပြောတာပဲ၊ ကျုပ်အတွက် အတော်လန်းဆန်းစေတာပဲ၊ ကျုပ်လည်း အစွမ်းပြ ကောင်းလိုက်တာ တစ်ဖက်ကောင်လည်ပင်းပြတ်သွားတဲ့အထိပါပဲဗျာ။
ပွဲပြီးလို့ နောက်တစ်ရက် ပွဲချိန်ရောက်တော့ ကျုပ်ဒုက္ခရောက် တော့တာပဲ ဗျာ၊ ကျုပ်မျက်ရည်တွေ အလိုလိုကျလာတယ်ဗျ၊ ပထမ တစ်ရက်နှစ်ရက် မှာတော့ ကျုပ် သိပ်မသိသာပေမယ်၊ တစ်ပတ်လောက်ကြာတော့ ကျုပ် အဆစ်တွေ အမြစ်တွေ ပါ ကိုက် ခဲလာတယ်ဗျာ။ စားလို့သောက်လို့လည်းမကောင်း၊ ကုန်ကုန်ပြောရရင် ကျုပ် အငယ်ဆုံး မယားကလေးအနားကိုတောင်မကပ်ချင်တော့ဘူး ဖြစ်နေတယ်။
ဒါနဲ့ ကျုပ် ကိုဖိုးချစ်ကို အားဆေးလေးတိုက်ပါဦးလို့ပြောတော့ ကိုဖိုးချစ်က မကြားတာပဲလား၊ဂရုမစိုက်တာပဲလား ကျုပ်အတွက် ဘာအကြောင်းမှ မပြန်လာဘူး။ ဒီလိုနဲ့ ဒုတိယ ချိန်းထားတဲ့ပွဲ ရက်ရောက်လာတယ်ဗျာ၊ နောက်ဆုံးပွဲမို့ ကိုဖိုးချစ်လည်း ရှိသမျှပုံအောလိုက်တယ်။ ပွဲမစခင် ကျုပ်ကိုလည်း အားဆေးတိုက်ပါတယ်။ ကျုပ်လည်း အတော်လေးသွက်သွက်လက်လက်ဖြစ်လာတယ်။
ဒါပေမယ် ဒီတစ်ပွဲနွဲရတဲ့ကောင်က ခေသူမဟုတ်ဘူးဗျ။ ပထမအချီတင် ကျုပ် အားကုန်နွဲလိုက်ရတယ်၊ အရင်ပွဲတွေလို မဟုတ်ဘူး၊ ကျုပ်အတော် မောတာဗျာ၊ ကျုပ်ရင်နှစ်ခြမ်း ကွဲထွက်တော့မယ်လို့ ထင်မိတဲ့အထိပါပဲဗျာ။
ကျုပ်တို့ကိုခေတ္တအနားပေးပြီး ဒုတိယအချီစဖို့ လုပ်တော့ ကျုပ် က ကိုဖိုးချစ် ကို အားဆေးထပ်တောင်းတယ်ဗျာ။ သူက မသိချင်ယောင်ဆောင်နေတယ်။ ဒုတိယ အချီစပါပြီဗျာ။
ဒုတိယပွဲချိန်စလို့မကြာမတင်မှာပဲ ကျုပ်မျက်ရည်ပူတွေ ကျလာပြန်တယ်ဗျာ။ အမှန်က ဒီလိုဒုတိယအချီမှာ ကျုပ်ကပွဲသိမ်းတိုက်ကွက်ကိုထုတ်သုံးနေကျဗျ။ အခု တစ်ဖက်ကောင်ရဲ့ တိုက်ကွက်ကို ကျုပ် သဲသဲကွဲကွဲမမြင်ရတော့ဘူး၊ ဒါကိုအခွင့်ကောင်း ယူပြီး တစ်ဖက်ကောင်က ကျုပ်ကို ပယ်ပယ်နယ်နယ် တွယ်တော့တာပါပဲဗျာ၊ ကျုပ်ဘဝမှာ ပထမဆုံးခံရတာပါပဲ၊ ဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဆိုတာလဲ ကျုပ်မပြောတတ် တော့ပါဘူး။ ကိုဖိုးချစ်ကလည်း အတော်လေးစိတ်ဆိုးနေပြီ။ ကျုပ် အသက်အရွယ် ရလာလို့ပဲလားဗျာ။
ပွဲပြီးသွားပြီ၊ ကျုပ်အကြီးအကျယ်ရှုံးသွားတယ်ဗျာ။ ပွဲဆိုတာ အနိုင်ရှိရင်၊ အရှုံးရှိတာဓမ္မတာပါ၊ ကျုပ် ဒီတစ်ကြိမ်ပဲရှုံးဖူးတာပါ။ ကိုဖိုးချစ်အတွက် ကျုပ်နောက် တစ်ကြိမ်ကြိုးစားပေးမှာပါ။ ဒါပေမဲ့ ကျုပ်ဘယ်လိုပြောပြော ကိုဖိုးချစ်က လက်မခံ ပါဘူးဗျာ။ ကျုပ်ကို ရိုက်လိုက်တာလည်းမပြောပါနဲ့၊ အကြိမ်ကြိမ်လည်း ကိုင်ပေါက်သေး တာ၊ ဘယ်လိုမှ တောင်းပန်လို့မရတဲ့အဆုံး ကျုပ် အိမ်ခေါင်မိုးပေါ် တက်ပြေးမှ သက်သာရာ ရတော့တယ်။
ကျုပ် တစ်ညလုံး အိမ်ခေါင်မိုးပေါ်က မဆင်းရဲဘူးဗျာ။ မနက်ကျတော့ ဝတ်စုံ ဆင်တူဝတ်ထားတဲ့လူတွေ ကိုဖိုးချစ် အိမ်ရှေ့ကိုရောက်လာကြတယ်ဗျ။ အိမ်ထဲမှာလဲ ရှာကြတယ်၊ ကိုဖိုးချစ်ကိုလည်း အိမ်ရှေ့မှာကန်ကျောက် ထိုးကြိတ်လိုက်ကြတာ မပြော ပါနဲ့။ ကျုပ်က ကိုဖိုးချစ်ကိုအော်ပြောလိုက်မိတယ်၊
“ဝဋ်ကြွေးတုန်တင် ဆိုတာ ဒါပဲ ကိုဖိုးချစ်ရေ”
“အောက်… အီ… အီး…. အွတ်”
mynamar steemit writing culture novel
3년 전 by tinhlaingoo61
ကောင်းလိုက်တဲ့ ဝမ်ချိုင်း ဆရာရေ
This post has been upvoted for free by @microbot with 5%!
မနိုင် နိုင်သူပေါ်ပေါက်တာ ဓမ္မတာပါပဲ
ဆရာတင် ရေးချက်ကတော့ အငယ်ဆုံးလေးနားတောင်
တစ်မျက်နှာဝတ္ထုလေးတွေရေးချင်နေတာ ကိုထွေးရ ဒီနေ့ရေးဒိနေ့တင်ပေးလိုက်တာ။
စစ်ကိုင်းမှာကဆင်ဖြူရှင်လက်ထက်က ထားတဲ့ ယိုးဒယားသားတွေရှိနေတာဆိုတော့ဝိုင်းပိုကောင်းမှာပေါ့။
ပညာ‌တွေချပြ‌နေတာ သိပ်‌‌ကောင်းတယ်‌ဆရာ‌ရေ။ ‌လေ့လာသင်‌ယူလျက်‌ပါ။
တိုက်ကြက်မွးသူများက မွေးတဲ့ကြက်ကိုတော့ ချက်စားလေ့မရှိကြဘူး။
ချက်စားတာထက် ဦးကျိုးသွားရင် ရောင်းပစ်တာများတယ်။
ဝဋ်က ချက်ချင်းကို လည်တော့တာပါလား ဆရာ